အမေ့သား: အမေ့သားရဲ့  ချစ်ရပါသောသူ....
အမေ့ဝမ်းမှ စထွက်လာကတဲ့ကသူ့ အကြောင်း ကိုယ်ကြားခဲ့ရတယ်၊သူသည်ချောလား? လှလား?
ကိုယ်မမြင်ဖူးပါပဲ စွဲလန်းခဲ့မိတယ်....နောက်ပိုင်း သူ့ ကြောင့် အဖေနဲ့အမေစကားများကြတယ်....
ကိုယ်လည်း သူ့ ကြောင့် အရိုက်ခံရတယ်၊ဒါပေမဲ့ မမုန်းပဲ ပိုချစ်လာခဲ့တယ်......
ကိုယ်အရွယ်ရောက်လာတော့၊သူ့ ကိုချစ်ခွင့်ပန်ခဲ့တယ်။သူ လက်ခံခဲ့တယ်………
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်နဲ့ သူ အတူမနေပါ (ယုံပေးပါ)
ကိုယ်တွေ့ ချင်သောအချိန်တွင်သူမလာပဲ ကိုယ်အိပ်ပျော်နေသောအခါခဏတာလာ၍ပြန်သွားတတ်သည်။
အဆင့်အတန်းလည်း ခွဲခြားဆက်ဆံတတ်တယ်၊ကိုယ်ရှေ့တွင်ပင် သူသည် အခြားတယောက်နဲ့ တွဲပြီး
မင်းကို ဒီလိုမမြင်ချင်ဖူးတဲ့ ကိုယ် သူ့ ကိုအရမ်းကြောက်သွားပြီ ……ဒါပေမဲ့ ချစ်နေတုန်းပဲ....
တနေ့ မှာ မမျှော်လင့်ပါပဲ သူထက်ပိုချစ်ရမဲ့သူကို ကိုယ်တွေ့ခဲ့တယ် ကိုယ်တို့ကျောင်းကပေါ့
ဒါနဲ့ ပဲ ကိုယ် သူ့ ကိုပြောပြလိုက်တယ်၊ကိုယ်မှာ သူ့ ထက်ပိုချစ်ရမဲ့သူရှိတယ်လို့ သူကြည်ဖြူစွာပဲ
ခွင့်ပြုခဲ့တယ်…ပြီးတော့သူ ပြုံးနေတယ်……..
ချစ်သူနဲ့အတူပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ ကြောင့်ပဲပျော်တခါစကားများတလှဲ့ နဲ့ အချိန်တွေဖြတ်သန်းရင်......
သူဟာ ကိုယ့်အပေါ်စိုးမိုးနိုင်သလောက် သူသည်ချစ်သူကိုတော့ သံယောဇဉ်ရှိသည်…..
သူကြောင့်ပင် ချစ်သူစကား ကိုယ်နားထောင်ခဲ့တယ် သူသည်ချစ်သူနဲ့ ကိုယ်မိသားစုအား
တနေ့ တော့ သူကိုဆန့် ကျင်၍ ချစ်သူနဲ့ ကိုယ်နှစ်ယောက်တစ်ဘဝထူထောင်ခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့
မင်္ဂလာပွဲကို သူလာခဲ့တယ်၊ချယ်လှယ်ခဲ့တယ၊် စီစဉ်ခဲ့တယ် ချစ်သူနဲ့ ကိုယ် ဘာမှမလွန်ဆန်နိုင်ပဲ
သူစီမံရာနာခံခဲ့ရတယ်၊ပြီးတော့ သူ ပြုံးပြပြီးပြန်သွားတယ်……
မင်း.. ကိုယ့်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်ပါဖူးကွာဆိုတဲ့အပြုံး…. ကိုယ်တသက်မမေ့နိုင်ခဲ့ဖူး
ကိုယ်တို့ စီကို သူလာလိုက် ပြန်သွားလိုက်၊ချယ်လှယ်လိုက်နဲ့အချိန်တွေကုန်လာခဲ့တယ်
တနေ့ တော့ ကိုယ်တို့ နှစ်ဦး သူနဲ့ ဝေးရာ ထွက်ပြေးဖို ဆုးံဖြတ်ခဲ့တယ်
သူကိုကြောက်လို့တော့မဟုတ်ပါ ချစ်ပါသည်... သို့သော် စိတ်နာသည်။
ကိုယ်တို့ သူနဲ့ ဝေးရာ Singapore ကိုသွားဖို့ စီစဉ်ခဲ့ကြတယ်၊ရန်ကုန်လေဆိပ်က စထွက်တော့
Singapore ရဲ့ Changi လေဆိပ်.....
ကြီးကျယ်ခမ်းနားလို့ ကိုယ်တို့ ဇနီးမောင်နှံ လျှောက်ကြည့်နေတုန်း..သူ.............ဟုတ်ပါသည် သူမှ သူ
ကိုယ် ချစ်ရ ......ကြောက်ရ ကိုယ်တို့ အပေါ်ချယ်လှယ်တတ်သောသူကတ်ပြားလေးကိုင်လို့ 
ကိုယ်တို့ စီ လှမ်းလာရင်း Welcome to Singapore တဲ့
ပြီးတော့ သူက ကိုယ့်အချစ်ဦးရဲ့ အစ်မတဲ့…. တခါမှမပြောခဲ့ဖူးပါ။သူတွင် အစ်မရှိသည်ဟု မကြားခဲ့ပါ။
သူနဲ့ က အဖေ….အမေ မတူပေမဲ့ သွေးချင်းတူတဲ့ ညီအစ်မတွေပါတဲ့
Singapore မြေကိုခြေချခဲ့မိပြီ…ဟုတ်ပါသည်.... အချစ်ဦးနဲ့ သူသည် အတော်ကိုတူပါသည် ခွဲခြားမရအောင်တူ၏..ပြုံးသောအပြုံးပင်ထပ်တူကျခဲ့သည်။ တခုတော့ရှိသည် အချစ်ဦးသည်
အနေအထိုင်ပက်စက်၍ ဖြစ်သလိုနေတတ်သော်လည်း သူသည်တည်ငြိမ်၍ အဆင့်အတန်းရှိသည်။
ပို၍တူညီခဲ့သည်မှာ အရာရာတိုင်းသူစီမံရာ နာခံရသည့်အဖြစ်အချစ်ဦးကိုကြောက်၍ ပြေးခဲ့သော
ကိုယ်တို့ ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ပါ အိမ်အသုံးအဆာင်များဝယ်သောအခါ၊ကိုယ်တို့ ဇနီးမောင်နှံအတွက် အဝတ်အစားဝယ်သောအခါ၊သူချုပ်ချယ်ကာဟိုဟာမဝယ်နဲ့ဒီဟာမယူနဲ့ ဟုဝင်ရောက်ပြောဆိုပြန်သည်။
တအိမ်လုံး၏ ကိစွ မှန်သမျှ သူပါမှပြီးခဲ့သည်။သူသည်တခါတရံ ကိုယ့် ကိုဆူပူပြီးသူအပေါ်
မလေးစားဟုပြောတတ်သည်။ကိုယ်ဇနီးအပေါ်တော့သူကောင်းပါသည်၊ဇနီးကလည်းသူ့ ကို လေးစားရိုသေသည်။
ကြာလာတော့လည်း သူ နဲ့ ကိုယ်တို့နားလည်မှု့ ရခဲ့ ကြသည်။ သူသည် တခါတရံ စိတ်ဆိုးကာ
အိမ်မှထွက်သွားတတ်ပြီး စိတ်ပြေလျှင် ပြန်လာတတ်၏။သူပြန်လာသောအခါ ကိုယ်တို့ မှာ သူကို နောက်တခါ မထွက်သွားဖို့တောင်းပန်ကာ သူကျေနပ်အောင် ဂရုစိုက်ရသည်။
ခုတော့လည်း နားလည်မှုရလို့ ကိုယ်ရယ်၊သူရယ်၊ကိုယ့်ဇနီးရယ် အတူတူနေရင်ဘဝကိုဖြတ်သန်းဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။
တခါတလေတော့လည်း မြန်မာပြည်က အချစ်ဦးကိုသတိရသည်. အခါသင့်ရင်တော့
Posted by အမေ့သား at Monday, February 13, 2012
Labels: ခံစားမှု, သရုပ်ဖော်
mstint February 15, 2012 at 1:38 PM
အမေ့သားရေ ဖတ်လို့တော့ကောင်းပါရဲ့ ဦးနှောက်စားတာလေးကလွဲရင်ပေါ့။
တစ်ပါးသူတွေအပေါ် ဒီလောက်ကြီး စိုးမိုးနိုင်တာ ဘာဖြစ်လို့လဲကွယ်။
အမေ့သား February 19, 2012 at 1:03 AM
တီတင့် မြန်မာပြည်က အချစ်ဦးစီပြန်လာလည်ရင်းနဲ့...တီတင့်အိမ်ကိုလည်းလာလည်မယ်နော်...
gina vinasoy July 12, 2012 at 3:28 PM